Casharka 6aad ee Gargaarka degdegga | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dhiig bax waa waxyaabaha ugu badan ee keena dhimashada sidaa daraadeed, joojinta dhiig baxa dibada waa in la siiyaa ahmiyada kowaad. Dhiig baxa waxaa loo qeybiyaa dhiig bax dibada ah iyo dhiig bax gudaha ah.
Noocyada dhiig baxa
Dhiig baxa halbowlayaasha
Dhiiga waxaa uu u socdaa si xawli ah. Dhiiga waa uu sii saa’idaa garaaca wadnaha awgiis wayna adagtahay in la xadido. Dhiig baxaani waa mid aad
qatar u ah maadaama uu qofka dhumin karo dhiig badan oo Oxygenated ah.
Dhiig baxa arooriyaasha
Waa ay fududahay in la xadido sababtoo ah dhiiga ku jira arooriyaasha waa dhiig cadaadiskiisu yaryahay, waana fududahay in ay xanjir sameeysmato si uu dhiiga u istaago.
Dhiig baxa tiftaafyada
Waa dhiig baxa ugu badan ayna fududahay in la xadido maadaama ay tiftaafyadu u dhaw yihiin maqaarka jirka, cadaadiska dhiiga ku jira tiftaafyada waa mid aad u yar.
Maareynta dhiig baxa
Samee tijaabooyinka aasaasiga ah DRS ABCD
Gee qofka goob caafimaad
Kor u qaad xubinta dhaawacan.
Dhiig baxa waxaa uu sababi karaa miyir la’aan waxaa uu qofka u baahanyahay CPR.
Si toos ah u cadaadi qeybta dhaawacan si dhiiga uu u joogsado.
Hadii uu jiro dhiig bax gudaha ah waa ay adagtahay in wax laga qabto, sidaa daraadeed waa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan qofka geysaa goobta caafimaadka kuugu dhaw.
Tags: Casharka 6aad ee Gargaarka degdeggahttp://www.tukesomalism.com/2016/08/20/casharka-6aad-ee…kesomalism-com-2/
Next post Casharka 7aad ee Gargaarka Degdegga |Tukesomalism.com
Previous post Siddee Ummada Soomaaliyeed Ay Ku Gaari Karaan Cadaalad Iyo Nabad?